Ny sakafo tsara indrindra hanandramana any Mozambika
Afrika & Afovoany Atsinanana Mozambika
Ireo Top Top 8 hanandramana any Mozambika
Miorina eo amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny kontinanta Afrikana, Mozambique dia toerana iray tsy voatery voavadika malaza ho an'ireo nosy paradisa sy tora-pasika mahafinaritra. Izy io koa no safidy tsara indrindra ho an'ny sakafo, noho ny lova manan-karena manan-karena. Tamin'ny 1498 dia tonga tany Mozambika ilay mpikaroka, Vasco da Gama, nandavaka ny lalana nandritra ny 500 taona teo amin'ny fitondrana Portiogey. Nandritra io fotoana io, ny fitaovana sy ny teknolojia Portiogey dia nanjary ampahany manan-danja tamin'ny sakafo Mozambika.
Amin'ny ankapobeny, ireo kolonely kolonialy voalohany ireo dia mifototra amin'ny famoronana piri-piri, sòs-tsaramaso voafantina izay midika hoe dikan'ny Swahili ho "dipoavatra". Mihinam-boankazo miaraka amin'ny voankazo, tongolo gamela, vinaigitra ary paprika, ny sifotra goavam-be misy ny sokatra afrikanina, ny endriky ny endriky ny Afrikanina karazam-boankazo ao Capsicum chilli. Ny piri piri piri piri piri-piri androany dia manana dikany amin'ny fikarakarana Mozambika, ary ampiasaina ho toy ny trondro ho an'ny zava-drehetra avy amin'ny steak amin'ny seafood.
Ny sakafo ara-paritra dia miankina betsaka amin'ny hazan-dranomasina vaovao avy amin'ny morontsiraka goavam-be ao amin'ny firenena, raha ny henan-kisoa sy ny osy no fihinana be indrindra. Ny starch dia avy amin'ny endriky ny xima (nomena hoe "shima"), karazana katsaka maitso matevina; sy cassava, fotodrafatra avy amin'ny portiogey Breziliana. Ny voankazo miavaka toy ny mango, avocado ary papay dia samy mora sy mora. Ny kintan'ny kulinarin'i Mozambikana anefa dia voaniho ary cashews, izay samy ampiasaina amin'ny fomba mahazatra amin'ny fomba mahazatra.
Indreto misy karazan-tsakafo vitsivitsy indrindra ao Mozambika, araka ny filazan'i Craig Macdonald: mpitantana sy Chef chef ao amin'ny Situ Island Resort any amin'ny Quirimbas Archipelago , Mozambika. Mazava ho azy fa ireo rehetra ireo dia tsara indrindra amin'ny alàlan'ny labiera mangatsiaka amin'i Laurentina na labiera 2M .
Galinha asada dia midika hoe avy amin'ny teny portiogey ho an'ny "akoho roquet", fa matetika any Mozambika dia matetika izy no mitazatazana, na mitefoka ny afo misokatra eny an-dàlana. Kitapo ho an'ny Mozambikana eo an-toerana, afaka miomana amin'ny fomba samihafa. Mazava ho azy, ny karazana piri piri-piri malaza indrindra, izay ahafantarana ny hena ao anaty saosy malaza alohan'ny hanomanana azy. Ireo fitaomam-batana dia miovaova avy amin'ny faritra mankany amin'ny faritra ary miankina amin'ny zavatra mora indrindra, anisan'izany ny chilli, laisoa, tongolobe ary paprika maitso. Galinha Zambeziana dia fiovàna manokana avy amin'ny faritanin'i Zambezia. Amin'io fotoana io, ny akoho dia voahosotra ao anatin'ny ronin'ny voanio voanio voatefy.
Rissóis de camarão dia ohatra tsara indrindra amin'ny habetsahan'ny sakafo portogey portogey efa nanjary niorina tamin'ny kolontsaina Mozambikana. Ny lakaoly malaza na ny sakafon'ny sakafo any amin'ireo firenena roa ireo, ireo croquettes miorim-bolana ireo dia misy sira salohim-bary iray manontolo, izay miankina amin'ny tsimokaretina mety ahitana koa ny zava-manitra na piri-piri. Miangona ao anaty fonon-tsakafo ilay fitambaran-kitapo, ary avy eo dia natsofoka tao anaty atody iray ary nanarona mofo mafana, alohan'ny hanasàna azy. Rizois de camarão dia afaka mahazo hafanana na mangatsiaka, fa ny tsara indrindra nividianana azy avy eo amin'ny fantsom-bokatra teny amoron-dalana.
Tsy toy ny maro amin'ireo lovia ao amin'ity lisitra ity, ny Mozambikana tokana dia matapa. Na dia miara-mizara ny anarany amin'ny fanjakàna Afrika iray aza izy io, dia sakafo matsiro tsotra izao, vita avy amin'ny ravin-koveta voaroy mifangaro amin'ny voanjo, voanio ary ronono voanio. Maitso izy io fa tsotra, ary mendrika ny hivoatra ankoatra ny trano fisakafoanana any Andrefana ao Mozambika mba hanandrana izany. Matapa matetika ny matapa fa ny vary no sakafo tena izy, ary misy kobay kely na kalsioma manampy trondro amin'ny tsiro fanampiny. Azo atao ihany koa ny miaraka amin'ny hazan-dranomasina na ny hena, ary tena matsiro be rehefa manomboka amin'ny xima.
Ny morontsiraka Mozambika dia mirefy 1,535 kilaometatra / 2.470 km, ary ny ankamaroan'ny mponina ao dia miankina amin'ny ranomasina noho ny fivelomany. Tsy mahagaga àry raha milalao be ny atody ao an-toerana. Trondro masaka, calamari marevaka, horita mivonona amin'ny tongolo lay sy ovy potipotika ... Ireo rehetra ireo dia mora hita. Saingy, ny fiheverana dia tsy isalasalana fa ny mozambikan'i Mozambique, izay matetika dia mitombo ho amin'ny haben'ny tsy mampino. Matetika izy ireo no ampiasaina am-bifotsy sy sotro amin'ny sira piri-piri; Na dia misy lemaka sy tongolo lay koa aza ho an'ireo izay tia tsiro mangatsiaka. Ny prawns Nacional dia tian'ny olona iray hafa, nanompo miaraka amin'ny saosy lasitra mofomamy.
Tsy ny firenena Portio ihany no manana fiantraikany eo amin'ny fisakafoanana Mozambikana. Ny firenena iray ihany koa dia manana ny iray amin'ireo Indiana malaza indrindra any Afrika, noho ny ankamaroany amin'ny fifamatorana nisy teo amin'i Mozambika sy ny fanjakan'i Goa fony izy roa ireo dia anisan'ny ampirabe Portiogey. Chamussas dia karazan-tsakafo telo-polo, sakay mahavoky ny indostria samosa. Ao Mozambika, ny famenoana dia mifandraika amin'ny hena sy trondro ho an'ny ovy na ny sigara. Ny sakafo eny an-dalambe malaza na ny sakafo eo anelanelan'ny sakafo dia ao amin'ireo tanàn-dehibe tahaka an'i Maputo sy Inhambane, no anaovana azy ireo manokana amin'ny fiangonan'ny Mozambika.
Ny klasika Portiogey iray indray dia nirohotra tamin'ny Mozambikana, ny dobrada dia tany am-boalohany dia sakafo fihinanan-tany tany Portiogaly saingy heverina ho zava-maitso. Ny dikan-teny Eoropeana dia midika hoe voatsangam-boina novonoina miaraka amin'ny kifafa na fotsy fotsy ary chorizo. Ao Mozambika, sarotra kokoa ny tongolo katsaka, ny tsaramaso ary ny chorizo, ary noho izany dia manoloana ny ovy, tongolo, voatabiha, poti-maitso ary kilaoty. Mazàna i Dobrada no manolotra vary, na dia manolo-tena aza i xima. Azonao ampiasaina ny valala maitso mba ahafahanao mitsambikina miaraka amin'ny rantsan-tongotrao - ny fomba mahafa-po indrindra amin'ny fihinanana sakafo izay mamonjy amin'ny fanasana.
Matetika ny paõzinho dia ampahany kely amin'ny paõ. Avy any amin'ireo tanàna be mponina indrindra any amin'ireo tanàna lavitra indrindra, dia fitambarana ao Mozambika izany, ary ny mpanao mofo dia nampianarina ny fahaiza-manamboatra ny ravin-tsoavaly hatramin'ny kely indrindra. Tsy ny karazam-pivarotana makotrokotroka misy anao. Nokolokoloina tamin'ny kitay vita amin'ny hazo ary nofefena tamin'ny lafarinina lafarinina tsara indrindra, ny paõ dia tsy mazava tsara sy mavokely. Mora ihany koa izany, mameno sy mampihena tsiro - indrindra raha mifoha aloha ianao mividy azy ireo raha mbola mafana izy ireo. Afaka mihinana amin'ny tenany izy ireo na miaraka amin'ny sakafo hafa. Matetika izy ireo dia vita amin'ny piringa piri-piri-piri-pirin-drano ary ampiasaina mba hanaovana miloko mialoha.
Nantsoina hoe ben'ny tananan'i Polana tao Maputo i Bolo Polana, ka ny dessung nentim-paharazana dia matetika no ampiasaina amin'ny fotoana manokana. Izy io dia vita amin'ny potato mashed ary pothews vovoka, mamorona tontolon'ny mofomamy mahavariana ary manitra manitra sy manitra. Zava-pisotro misy alikaola sy voankazo lavenona koa matetika. Cashews dia mora vidy ary mora manerana an'i Mozambika, satria nentina tany amin'ny firenena avy amin'ny portiogey Brezila. Nandritra ny taona 1960 sy 1970, i Mozambika no mpamokatra be indrindra eran-tany, ka ny antsasaky ny vokatra eran-tany. Bolo Polana dia fampahatsiahivana mahatalanjona an'io lova io.
Tour Instagram ao Mozambika
Mozambika Travel Guide: Facts manan-danja sy fampahalalana
Ny Top 7 Things to Do in Mozambique
Quirimbas Archipelago: Ny Nosy Paradisan'i Mozambika
10 amin'ireo zavatra tsara indrindra atao any Cape Town, Afrika Atsimo
Volombava eo amin'ny firenena manerana an'i Amerika 2017
Alahady A'Fair any Scottsdale, Arizona
Fivoriambe any Holandy mankany Zaanse Schans
Sarintany Sarobidy Sarobidy: Williamsburg-Jamestown-Yorktown
Trano National National Museum any Quito Ekoatera
Diabe tany Nouvelle-Angleterre
Aiza ho any Road Trip From Minneapolis-St. Paul
Zavatra atao atao amin'ny andron'ny rainy ao LA
Ahoana no hahazoana an'i Haridwar ho an'i Rishikesh
Hamilton: Washington DC Restaurant and Music Venue